Ity infographic ity dia tena mifanandrify amin'ny paikady apetrakay ho an'ny mpanjifantsika ao amin'ny masoivohon'ny media sosialy: Fanaraha-maso - manara-maso ny marika sy ny indostria izahay hanarahana ny mpanjifanay. Mamakafaka - manadihady ny marika izahay hamantarana izay olana momba ny lazan'olona sy ny fahatsapana. Manadihady ny indostria izahay mba hahitana fotoana, hanaraha-maso ireo mpifaninana ary hanampy amin'ny famolavolana paikady. Fiaraha-miasa - fanararaotana ireo mpanelanelana amin'ny paikadinao rehetra no tena ilaina. Fampiroboroboana ny medium iray amin'ny alàlan'ny iray hafa,
Sabotsy, Desambra 15, 2007 Alahady Oktobra 4, 2015 Douglas Karr
Miaraka amin'ny rindranasa raharaham-barotra maro izay miala amin'ny Microsoft, Mac dia mbola maharary amin'ny banga ihany amin'ny fihazakazahana eo amin'ny sehatry ny orinasa. Ny fanavaozana ny Operating System vaovao indrindra avy amin'ny Apple dia manome fanamaivanana amin'ny BootCamp, rindranasa ahafahanao manaparitaka Mac roa miorina amin'ny Intel na OSX na Windows. Ny booting indroa, amin'ny ankapobeny, dia toy ny mampandeha solosaina roa tsy mitovy amin'ny fitaovana mitovy amin'izany. Bootcamp dia tsara, fa miverina miverina